ZayYarHlaing: မေးလ်မှာ ကိုယ်ရဲ့ လက်မှတ် လှလှလေးတွေ ထည့်နည်း
အရင်ဖော်ပြပေးခဲ့ ဖူးတာများ ရှိခဲ့ ရင် အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင် အောက်က အဆင့် လေးတွေကို လိုက်လုပ်ကြည့် ရအောင်နော်။
1. http://mylivesignature.com/ အရင်းသွားလိုက်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်းကျလာလျင် Click Here To Start ကို click ပေးလိုက်ပါ။
(မှတ်ချက်။ ဒီ Sign လုပ်တဲ့ ဆိုဒ်လေးက အလကားအသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။အကောင့် မလိုပါဘူးခင်ဗျာ။အကောင့် လုပ်ရင် ပိုက်ပိုက်တောင်းလို့ ။ နားလည်အောင် တစ်ခါတည်းရှင်းပြထားတာပါ။)
2. ပြီရင် Using the signature creation wizard ကို click လိုက်ပါ။
3. အောက်မှာ တွေ့ရတိုင်းအတိုင်း Name မှာ မိမိပေါ်စေချင်တဲ့ Sign အတွက် Name ကိုရေးလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်က Zay Yar Hlaing လို့ရိုက်လိုက်ပါတယ်။ ပြီရင် Next Step ကို click လိုက်ပါ။
(မှတ်ချက်။ ဒီဆိုဒ်မှာတော့မြန်မာလို ရေးလို့ မရပါဘူးခင်ဗျာ။)
4.ဒီအဆင့်ကစပြီး ကျွန်တော် ပုံမတင်ပြတော့ပါဘူး။ အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရတဲ့ပုံမှာ မိမိစိတ်ကြိုက် စတိုင်းလ် (Style) ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။ ပုံစံ ၁၂၀ အထိရှိပါတယ်။ ပြီရင် Font အရွယ်အလိုက် လိုသလိုရွေးချယ်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ Font#10 ကိုဘဲ ရွေးလိုက်ပါတယ်။ပြီရင် Next Step ကို click လိုက်ပါ။
5. ဒီအဆင့်ကလဲ အောက်ပါအတိုင်း Select Size ကို ထပ်ရွေးချယ်လိုက်ပါ။
6. ဒီအဆင့်ကတော့ မိမိတို့ Sign ကိုစိတ်ကြိုက် အရောင် (color ) တွေကို ရွေးချယ်ရမည့်အဆင့် ဖြစ်ပါတယ်။
7.Slope စတိုင်းလ်တွေကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။ ပြီရင် Next Step ကို click လိုက်ပါ။
8. အောက်ပါအတိုင်းကျလာရင် What to download this signature? ကို click လိုက်ပါ။
Finished! The signature is ready.
Your signature ID: 54487-343-5DE77B2354D958CFA44F587213FD2C21
9. အောက်ပါအတိုင်းထပ်ကျလာပါမည်။ ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ Signature ရဲ့ url ကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါလေးကို copy လုပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို၇င် Signature လေးတစ်ခုဖန်တီးပြီးသွားပါပြီ။
If you want to download the signature with your download manager, please use this URL: http://signatures.mylivesignature.com/54487/343/5DE77B2354D958CFA44F587213FD2C21.png
ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးထားခဲ့တဲ့ Signature လေးကို Mail မှာဘယ်လိုအသုံးပြုကြမလဲ။
http://www.wisestamp.com/email-install ဆိုဒ်မှာ အရင်းသွားလိုက်ပါ။ ပြီရင် Drownload now ဆိုတာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို click လိုက်ရင် အောက်မှာတွေ့ရတဲ့ပုံအတိုင်း Allow ကို click လိုက်ပါ။
2. အထပ်ပါအတိုင်း Allow ကို click လိုက်ရင်အောက်ပါအတိုင်း ကျလာပါမည်။ Install Now ကို click လိုက်ပါ။ပြီရင် Firefox ကို Restart ကို click လိုက်ပါ။ Firefox က Restart ကျလာပါမည်။
3. ပြီရင် မိမိ Mail ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ပြီရင် compose mail ကိုနိုပ်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ အခုဏ Install လုပ်ခဲ့တဲ့ WiseStamp- Email Signatures Icon လေးကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ Icon ကို Left click ပေးလိုက်ပါ။ ပြီရင် Edit Signature ကို click လိုက်ပါ။
4. Edit Signature ကို click လိုက်ပါ။ပြီး၇င် HTML ကို click လိုက်ပါ။ ပြီရင် မိမိတို့ နံမည်နဲ့ Signature Site မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Link ကို Pase လုပ် Apply ကို click ပြီ Ok ကိုနိုပ်လိုက်ရုံပါဘဲ။ ဒါဆိုရင် မေးတစ်စောင်ပို့တာနဲ့ မိမိတို့ Sign လှလှလေးတွေ ပါတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
အောက်မှာတော့ရေးသားတဲ့မူရင်းလင့် ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
0 comments: to “ မေးလ်မှာ ကိုယ်ရဲ့ လက်မှတ် လှလှလေးတွေ ထည့်နည်း ”